I-5PM: Ukuphathwa Kwephrojekthi Okugcwele Okugcwele SaaS | Martech Zone
NgeSonto, ngoMashi 23, 2008 NgoMgqibelo, Okthoba 25, 2014 Douglas Karr
Enye yezinselelo zokuba neqembu elithuthukisiwe elivela ngaphandle noma elisogwini lolwandle ukuzama nje ukulandelela nokubeka phambili umsebenzi wakho. Ngisebenza ngezinsizakusebenza ezingekho ngaphansi kwezintathu ezikhishwe ngaphandle, enye yazo olwandle. Kubukeka sengathi uhlukanisa usuku lomsebenzi phakathi kwezindawo zesikhathi, ngokwethula wethula ukubambezeleka kukho konke okwenzayo.
Ngithole umshini wokushicilela lapho ngi i-Basecamp ekhanseliwe ngonyaka edlule. Okuxakayo ukuthi, ngenkathi ngisayina ngomsebenzi wami omusha, ngangibuyele emuva ngisebenza eBascamp futhi. Angishayi i-Basecamp, isicelo esifanelekile. Ngidinga nje okuthile ngomsebenzi oqinile nokulawulwa kwesikhathi. Ngenza ngaleso sikhathi, futhi ngithola ukuthi ngisakwenza namanje. Ibhodi yezingxoxo enohlu olulula lokukwenza nje ayilinqumi njengohlelo lokuphathwa kwephrojekthi.
Angazi noma uSergei Podbereschi noGreg Roy (abasunguli be Ukuphathwa Kwephrojekthi kwe-5PM software) abake basebenzisa i-Basecamp, kepha nakanjani bazibonela ezinye zezinkinga ezifanayo engizithola nginazo namuhla nenkampani yabo, Isoftware ye-QG.
Ngakho-ke bahlanganisa amakhanda abo bakhula I-5PM. Okuxakayo ukuthi lesi sicelo senziwa emazweni amabili ahlukene ngezilimi ezi-5 ezihlukene ezikhulunywa ngabasebenzi (manje) abayisithupha.
Ngemuva kokubona ukubuka kuqala kuka-5PM, ngathinta uSergei. Nakhu ukuthi i-5PM yenzeke kanjani:
Yakhiwa njengezisombululo eziningi zokuphathwa kwephrojekthi - ngaphandle kwesidingo. Kwabuya ngo-2003 ngenkathi siqala futhi kwakungeyona into laphaya esasiyithanda. Ngakho-ke siziqalele sodwa futhi sayibiza ngokuthi yiProjekthi neThimba leMenenja. Eqinisweni, leyo nguqulo yokuqala yasungulwa yimi ekuqaleni, lapho-ke saqasha amanye amakhodi ukuyinweba. I-5pm ikhule kusuka kulowo mkhiqizo wokuqala. Konke kuyi-web20, kepha, njengoba ubona, kusekelwe emibonweni emidala kakhulu. I-5pm empeleni bekukwakhiwa kabusha okuphelele. Konke kushintshile - kusuka kwipulatifomu yokuthuthuka kanye nesixhumi esibonakalayo kuya kubhrend. Sayethula ngoNovemba 2007, njengoba SaaS (inguqulo yangaphambilini ibingalandwa).
Ngicabanga ukuthi kuthatha ukubheka okukodwa ukubona ukuthi kwehluke kanjani. Asizange sisike amakhona lapho sakha i-interface. Besifuna yonke into ngaphakathi kokuchofoza noma ezimbili kanye nethuba lokwenza ngokwezifiso i-interface. Kuza ne-Flash Timeline (angazi noma iyiphi isoftware yokuphatha iphrojekthi exuba i-AJAX neFlash ndawonye).
Sinendlela ehluke kancane kusixhumi esibonakalayo nezici - sizama ukukwenza kube lula ebusweni ngenkathi sipakisha amandla amaningi "ngaphansi kwe-hood". Futhi, u-5pm ungumphumela wokuxuba okuthakazelisayo kwemibono - uGreg ungumphathi we-IT onolwazi lweminyaka eyi-15, ngenkathi ngiwumklami wewebhu omncane nonjiniyela. Abaphathi bathanda ukubukwa okuningiliziwe nemibiko. Abathuthukisi bazonda amathuluzi wokuphatha iphrojekthi, ngokuyisisekelo. Ngakho-ke sizamile ukuklama i-interface lapho kulula khona ukuthi amalungu ethimba angeze imilayezo noma avale umsebenzi ngokuchofoza okukodwa (noma nge-imeyili), ngenkathi abaphathi benamandla okumba bajule.
Ngicabanga nokuthi sizohlukanisa okuningi njengoba sengeza izici, sisebenzisa impendulo evela kumakhasimende ethu. Lindela ushintsho olukhulu esigabeni sethu somugqa wesikhathi nemibiko ezinyangeni ezizayo.
Ngicele ukubuyekezwa kozakwethu bezentuthuko ngo-5PM ngokushesha. Iqembu belibheka Jira, kepha isikhombimsebenzisi siyangidida ngokweqiniso ukuphuma kwami. Ngithemba ukuthi ngizothola isibhamu ngokusebenzisa i-5PM!
Okwakho ama-Office Space buffs laphaya, uzophinde uthokozele idemo. Kwanele.
Tags: 5pmUkuphatha iphrojekthisaasukuphathwa kwephrojekthi elulaisoftware njengesisombululo
Mar 24, 2008 ku-1: 28 AM
Ngithanda isikhombimsebenzisi esibushelelezi nesinembile kakhulu. Ngiyazama manje (isivivinyo samahhala sezinsuku eziyi-14). Asibone!
Mar 24, 2008 ku-2: 27 AM
Ngisanda kufunda okuthunyelwe kwakho futhi njengoba ufuna ithuluzi elihle lokuphatha iphrojekthi ngincoma ngokuqinile ukuthi ubheke ngaphezulu ProjectOffice.net. Yisixazululo sakusihlwa esisuselwe kusihlwa futhi esinikeza ukuphathwa kwesikhathi esihlelwe kahle nezindleko, ama-wiki nokulandelwa kwezinkinga.
Ngikholwa ukuthi uzoyithanda.
Ngakho-ke, zama futhi ungazise isipiliyoni sakho.
Mar 24, 2008 ku-9: 49 AM
Yini, ngabafana be-5PM abavela e-Indiana?!? 😉
Ngiyadlala. Ngisanda kubheka u-5PM futhi, ebusweni, kubukeka kukuhle impela!
Mar 24, 2008 ku-10: 00 AM
Ha! Cha - kepha basondele… e-Ohio;).
Ngemuva kokubheka isicelo ngangiqhutshwa kahle futhi ngangifuna ukubhala ngakho. Ikakhulu njengoba bengingakaze ngikubone kubhalwe nganoma iyiphi enye indawo online. Ukuseshwa kwamanye amabhulogi akuvelanga ngalutho futhi uSergei wenza 'ingxoxo ebonakalayo' nge-imeyili.
Isikhathi sasisihle futhi - ngoba silwa nalezi zinkinga zokuphatha emsebenzini wami njengamanje.